ဒါဟာ Puglia အတွက်ဒါပေမဲ့အီတလီနိုင်ငံအပေါငျးတို့သမသာအလှဆုံးအပန်းဖြေတစ်ဦးအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ဥရောပစဉ်းစားသည်. Borgo Egnazia ဥရောပအကောင်းဆုံး All-အားလုံးပါဝင်နိုင်အပန်းဖြေတစ်ဦးအဖြစ်မှတ်. Borgo Egnazia ရိုးရာနှင့်အတူကျက်သရေသင်လိမ့်မည် ဗိသုကာစတိုင် သငျသညျ Puglia ဖြတ်ပြီးသတိထားမိပါလိမ့်မယ်, အဖြစ်က၎င်း၏လှပအလှဆင်အခန်းပေါင်း, ရေကန်, ဂေါက်ကွင်း, နှင့်များအတွက်လှုပ်ရှားမှုကလပ်များပင် ကလေးတွေ နှင့်ဆယ်ကျော်သက်. ရထားBaríသို့မဟုတ် Brindisi ရယူပါပြီးတော့ Savelletri di Fasano သွားရောက်, အဆိုပါတာ သာယာလှပလမ်းကြောင်း Puglia အပေါငျးတို့သအလှအပကြည့်ဖို့.
အီတလီသို့သွားရောက်ဖို့အများကြီးအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့သောနေရာများရှိပြီး, Amalfi ကမ်းခြေသည်အီတလီလူမျိုးများအကြားအကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်. နှင့်ဥရောပအကောင်းဆုံး All-အားလုံးပါဝင်နိုင်အပန်းဖြေစခန်း၏တဦးတည်းရှိမှန်သည်. စန်း Pietro, ယင်း၏နှင့်အတူ 57 အခန်းပေါင်းနှင့် အလွန်နှစ်သက်ဘွယ်ကောင်းသော ကမ်းခြေ-side စားသောက်ဆိုင်ကိုသင်သလောက်မွေ့လျော်ပါလိမ့်မယ် အဆိုပါဒေသ၏အလှ. သငျသညျ Amalfi ဖို့အနည်းငယ်အမြန်ရထားစီးဘွတ်ကင်နိုင်ပါတယ်, Naples သို့မဟုတ် Salerno ကနေ - ကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုလမ်းမတစ်လျှောက်အမြင်များကိုခံစား.
သငျသညျပိုနှစ်သက်ပါလျှင် တောင်တပြင်ရှုခင်း အစား sprawling ၏ ကမ်းခြေ, သငျသညျလညျပတျဖို့အတှကျဥရောပအကောင်းဆုံး All-အားလုံးပါဝင်နိုင်အပန်းဖြေစခန်းများထဲမှသြစတြီးယားရဲ့ရှိစေခြင်းငှါ Tyrolean အဲလ်ပ်တောင်တန်း. ဟိုတယ် Tannenhof ကြောက်စရာကောင်းတဲ့သောတောင်ပေါ်အမြင်များဂုဏ်ယူ, ထိုသို့တစ်ဦးရဲ့ ကြီးမြတ်နှင်းလျှောစီးဆုတ်ခွာနေ အနည်းငယ်ပိုပြီးပုဂ္ဂလိကလေထုကြိုက်တတ်တဲ့သူများအတွက်. သငျသညျ Innsbruck ရှိထံမှလွယ်ကူစွာ Ischgl ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်, ဇူးရစ်, သို့မဟုတ် မြူးနစ် - ရထား Landeck ရန်သင့်အားကြာမြင့်မည်, အရာပြီးနောက်အပန်းဖြေကွာတိုတောင်းတဲ့ drive ကိုဖြစ်ပါတယ်.
ထဲမှာကော-Resort ကို Bavaria ၏လှပသောဒေသ ဥရောပအကောင်းဆုံး All-အားလုံးပါဝင်နိုင်အပန်းဖြေစခန်းတို့တွင်, အထူးသဖြင့်စကိတ်ဓာတ်လှေကားများနှင့်ကောင်းမွန်စွာတပ်ဆင်ထားသောအခန်းများကဲ့သို့သာယာအဆင်ပြေမှုများပေးသည့်အခါတွင်ဖြစ်သည်.